Atariisho caan ah oo ka ilmaysay abaaraha Soomaalia [Video] | Somaliska
Atariisho caan ah oo ka ilmaysay abaaraha Soomaalia [Video]
Atariisho caan ah oo ka mid ah kuwa jila filamaanta maraykanka ayaa booqasho ku tagtay xerada dhadhaab ee Kenya taasoo isbuucyadii ugu dambeeyay noqotay goob ay hadalhayaan warbaahinta caalamka. Xerada dhadhaab ayaa la sheegay in isbuucii ay yimaadaan dad gaaraya 10,000 qof oo ka soo lugeeyay Soomaaliya.
Atariishada lagu magacaabo Kristin Davis oo ka mid ah atariishooyinka ugu caansan Hollywood ayaa wareysi ay siineysay BBCda muuqaalka ah waxay joojin waysay ilmada indhaheeda ka socota marka ay ka hadleysay xaalada xerada dhadhaab.
Atariishada ayaa qaasatan waxay ka hadli waysay ilaa in ay ilmayso mooyee mar ay la kulantay haweeney Soomaaliyeed oo cuuryaan ah isla markaana wadata 3 caruur ah oo gaari dameer uga soo qaxday abaaraha Soomaaliya, oo sida ay sheegtay ninkeedii lagu dilay intii ay jidka ku soo jireen.
Halkaan ka daawo videoga http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-14105080
asc walalayaal hadii sidaas gaalada ka ilmeysiisey inaguna aynu baa bi ino shacabkeeni waa arin layaableh umaleyn mayo sida gabadhaas gaalada ah ay udareentay dhibka haysta somaalida in uu qof soomali ah udareemikaro subxanaalah
July 13, 2011 at 15:50
Alla Fiicnaan lahaydaa Soomaalida Haddii
Ay Sidaa Dhibka Haysta Uga Wada Murugoon Lahaayeen !
Fiicnaan lahaydaa , Haddii aan Sidaa Isugu Ooyno !
Nabad waarta Ayaan gaari Lahayn >
Halkeen Ciqaab la imaaneen , meel Dhiiga Muslimka lagu Qubaysanaa !
Halkee Raxmad Alle ka Imaanee Meel , Meel Dhiiga Muslimku Uu Raqiis Ka yahay ?
asc walalyal aniga xataa waa kailmaynaya dhibatada dadkena heesatoo iyo wadankena illahoow abaartan naga bixi iyo dhibatada dagaalka illahoow juuc iyo jahanaba naga haay gaajo waa cadow illahoow umadeena ka bixi illahoow barwaaqo noogu badal iyo meel loo soo xiiso dhibatda maanta wadankena katagan jaamac walal waxa haaya fikir ah inta wabkaada soo boqoto oo aqristo wargelin in aad u furto koonto abaaraha lagu taagera oo aan ku soo dhiiban waxiii sadaqo dhiibana oo arkaan masakintaan dhimanaysa qaarkamida halhaben xataa haku casheyan waxii muslimka ku soo shubaan wacyi galintaas fiicnan lahayd waa fikirkayga walal
Waa mahadsantahay Ayan fikirkaas maalin hore ayaan ka dhawaajiyay, laakiin dhibaatada waxay ka taagantahay cidii la aamini lahaa ee Soomaaliya lacagta ku qeybin lahayd. Aniga waan aruurin kara lacag balse yaa loo dhiibaa waaye suaasha.
Maalin hore dhalinyaro is xilqaantay ayaan kula kulmay Stockholm oo magaalada lacag ka ururineysa ragaas ayaan taageyranaa insha Allah bari ayaan jeclahay in aan soo qoro mowduuc ku saabsan Gurmadka ay bilaabeen dhalinyaradaas. Insha Allah
July 13, 2011 at 17:04
Walaal Jimcaale > maalin walba boqolaal ayaa gaajo soo ridanee , haraadna la daran .
Walaal waa sax in ay jiraan dhibaao ah yaa lagu aamina a, balse haddii la yiraa ya alagu aamina awaxaan filaa dadku weli dad wanaagsan waa ku jiraan .
Anaga hadda magaalada aan degana waa tuulo yar oo Borlänge la yira ainkastoo kaalinta 4 aad kaga jirno dhanka soomaali badida .
Masaajidka iyo Xaafadaha Soomaalida ayaa dhalin walaalo soomaaliyeeda oo is xilqaamay ka naadiyeen , albaabada u qaraaceen , dadkii waxayba dhaheen war dad aan u dhiibno waxaan hayno ayaan la ayn.
Alle mahadii lacag wanaagsan ayaa laga aruurshay magaalada , waxaaana filaa in haddaba la diray , waxaana filaa walaalaha reer Stockholm ayaa loo dhiibay , waxa akale oo jira walaalo iyana Köpin-nada ka aruurinaa iyo Guud ahaan Magaalooyin Sweden .
Marka walaal Jimcaale waxaan filaa isku xiraha Soomaalida Sweden waa somaliska , kaalintiisana waa looga fadhiyaa , haddii ay ahaan lahayd in dadka la baraarujiyo.
Abu xudeyfa waa runtaa waa arin nalooga fadhiyo insha Allah bari wixii ka bilowda ayaan bilaabeynaa olalaha bogga. Dhalinyarada Stockholm waan la kulmay wareysi ayaan ka soo qaaday iyo sida loola xiriira karo. insha Allah faahfaahin guud ahaan waxaan soo galin doonaa bari.
Magaalada Fagersta bari ayaan kulan ka yeelan doonaa haddii ale idmo oo gudi sameyn doonaa arintaan hawsheeda gala.
Ugaas Jimcaale waad mahadsantahay :
Run ahaantii arin murugo leh ayaa jirta , waana in aanan u kala harin Alle idinkiis , dhibka waa laga baxaa Insha’Allah.
Maah maah soomaaliyeed ayaa ahayd: aniguu xun ayuu Xoon i Qaniinay : Hadda inagoo awalba Colaad la daalaa dhacaynay , abaar ayaa noogo darsantay , waa mushkilo kale , waase dhibaato aan gacmaheena ku keensanay , maxaa yeelay meel dhiiga Muslimka ama Bini Aadamka oo Alle karaameeyay , Raqiis ka yahay , waaye dhulkeeno sidaa awgeed waa la is Imtixaamaa .
Asxaabtii Dagaalkii Uxud , Sunadii Nabiga ayay jibeeyeen , oo Ragii buurta la saaray way kasoo tageen , waakiina Gaaladu Muslimiinta dhabar jebisay , xitaa Nabigeena Suuban scw dhaawac iliga kasoo gaaray oo 70 Asxaabi lagu dilay isla goobtaa .
Ka waama meel Danbiyada La Galo kuwa ugu Waawayn lagu Samayna a, waa Qatul Nafsi , waa Dilka Naf aan waxba Galabsan .
Haddana Raxmada Alle lagama quusto ,
Alle roob uma wayn dadkaa , ee anaga ayaa nagula imtaxaamaa keena wax dhiibta iyo keena aan wax dhiiban .
Naxariista ……..Naxariista waa lagu kala sareeyaaa iyo qalbi jileeca….dhan kasta Rag iyo Dumarba, marka gabartaas aan Islaamka aheyn waxa ilmada indhaheeda ka keenay waa naxariis Alle qalbigeeda galiyay
Alle waxaan ka baryaaa sida ee ilmaha yar iyo waayeelka iyo haweynka dhiban ugu ilmeesay in Alle qalbigeeda Islaaminada ku weeneeyo…uuna islaam ka dhigo
Aamin : walaal Alle Qalbigeena Islaamka ha u Furo > Alle anagana Hanuunka kuwa loga daysado Allaha naga dhigo……..
Aaamiiin , anagana aamiin nooodhaha in ilaahay nagabixiyo dhibaatada farahabadnaatay ee umadeenii maanta la dawarsaneyso dunida dacaladeeda, nasiib xumo iyo ayaan darona waxaa ah in maanta umadaaas sidaas dhan udhiban gaajada, macluuusha,oonka,hoy la’aanta in dadkii masuulka ahaaa ay maanta wax aan macno laheyn isku haystaaan iyo aniga ha la isiiyo wasiirka lacagta aan lacagtooda waxloogu qabanayo jiiro lagaleee, walahi ilaahay ayay leedahay umadan xataa majiro mid damiir lahoo kadamqanaya waxa gaaladu ka ooyayaan,